ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာမယ် - CeleLove
အလွန့်အလွန်အားကောင်းနေတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” ရဲ့ အရှိန်ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးမိုးရွာနိုင်တယ်လို့ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက မေလ(၂)ရက် ညနေ(၄)နာရီက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မေလ(၂)ရက်ကနေ (၄)ရက်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကရင် ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ နေရာစိပ်စိပ်၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကျား ကနေ နေရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ အချို့ဒေသတွေမှာ နေရာကွက်ပြီး မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ….. ။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ ရံဖန်ရံခါ မိုးသက်လေပြင်း ကျနိုင်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်၊ မြေပြင်လေဟာတစ်နာရီကို မိုင်(၄၀)ကနေ (၄၅)မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ လှိုင်းအမြင့်ကတော့ (၁၀)ပေကနေ (၁၃)ပေအထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ် …. ။
မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်းပျံသန်းရေး၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့က ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်တွေ၊ သင်္ဘောတွေအနေနဲ့ သတိပြုဖို့လည်း အသိပေးထားပါတယ်။ အလွန့်အလွန်အားကောင်းနေတဲ့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း “ဖန်နီ” ဟာ နောက်(၃၆)နာရီအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိဿကမ်းခြေကို ဂိုလ်ပါပူရ်မြို့နဲ့ ချန်ဘာလီမြို့ အကြား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ် ….. ။
အလှနျ့အလှနျအားကောငျးနတေဲ့ ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး “ဖနျနီ” ရဲ့ အရှိနျကွောငျ့ တဈနိုငျငံလုံးမိုးရှာနိုငျတယျလို့ မိုးလဝေသနှငျ့ ဇလဗဒေညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနက မလေ(၂)ရကျ ညနေ(၄)နာရီက ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။ မလေ(၂)ရကျကနေ (၄)ရကျအထိ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအထကျပိုငျး၊ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကခငျြပွညျနယျ၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ ကရငျ ပွညျနယျနဲ့ မှနျပွညျနယျတို့မှာ နရောစိပျစိပျ၊ နပွေညျတျော၊ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအောကျပိုငျး၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ၊ ရှမျးပွညျနယျ၊ ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ကယားပွညျနယျတို့မှာနရောကှကျကြား ကနေ နရောကြဲကြဲ မိုးထဈခြုနျးရှာပွီး၊ အခြို့ဒသေတှမှော နရောကှကျပွီး မိုးကွီးနိုငျတယျလို့ ထုတျပွနျထားတာဖွဈပါတယျ ….. ။
မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနဲ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့မှာ ရံဖနျရံခါ မိုးသကျလပွေငျး ကနြိုငျပွီး လှိုငျးကွီးနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မိုးသကျလပွေငျးကစြဉျရပွေငျ၊ မွပွေငျလဟောတဈနာရီကို မိုငျ(၄၀)ကနေ (၄၅)မိုငျအထိ တိုကျခတျနိုငျပါတယျ။ လှိုငျးအမွငျ့ကတော့ (၁၀)ပကေနေ (၁၃)ပအေထိ ရှိနိုငျတယျလို့ ထုတျပွနျပါတယျ …. ။
မုနျတိုငျးအရှိနျကွောငျ့ ပွညျတှငျးလကွေောငျးပြံသနျးရေး၊ မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနဲ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့က ကမျးနီး၊ ကမျးဝေးငါးဖမျးရယောဉျတှေ၊ သင်ျဘောတှအေနနေဲ့ သတိပွုဖို့လညျး အသိပေးထားပါတယျ။ အလှနျ့အလှနျအားကောငျးနတေဲ့ ဆိုငျကလုနျး မုနျတိုငျး “ဖနျနီ” ဟာ နောကျ(၃၆)နာရီအတှငျး အိန်ဒိယနိုငျငံ သွရိဿကမျးခွကေို ဂိုလျပါပူရျမွို့နဲ့ ခနျြဘာလီမွို့ အကွား ဖွတျကြျောဝငျရောကျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ ….. ။